जनमतको अवमूल्यन गर्दै एमालेका नेताहरु मोजमस्तीमा तल्लिन !
काठमाडौं, २ साउन । नेकपा एमालेका नेताहरु जनमतको अवमुल्यन गर्दै मोजमस्तिमा तल्लिन भएको पाइएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा जित निकालेको भन्दै नेकपा एमालेले पछिल्ला दिनहरुमा केक काट्ने देखि पार्टी प्यालेसहरुनै रिजर्भ गरी पार्टी दिइरहेका छन् ।
यसरी नेताहरु मोजमस्तीमा लाग्दा उनीहरुको चौतर्फी आलोचना भएको छ । हालैमात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको बालकोटमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमाले नेताहरूले केक काटेर खुसियाली साटासाट गरे । तर फोटोसहितको स्ट्याटस अपलोड गरेको ४ मिनेटमै महासचिवको वालबाट उक्त पोस्ट हटाइयो ।
‘कंग्र्याचुलेसन फर विनिङ लोकल इलेक्सन’ (स्थानीय निर्वाचन जितेकोमा बधाई) लेखिएको केकको फोटो फेसबुकमा राख्दै महाचसिव ईश्वर पोखरेलले लेखेका थिए, ‘आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा आयोजित स्थायी कमिटीको बैठकमा पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको खुसियालीमा केक काटेर खुसियाली मनाइयो ।’
बैठकले तेश्रो चरणमा हुने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई पहिलो बनाउने संकल्प गरेको महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । मत परिणाम घोषणा भएका ६१६ स्थानीय तहमध्ये एमालेले २७६ स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष जितेको छ ।
कांग्रेसले २२६ स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले ८४ तह जितेको छ । यसरी जनताले प्रतिनिधिहरु चुनेतापनि प्रतिनिधिहरुले नमुनात्मक कामको सुरुवात गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक संजालमा आक्रोस बढेको छ ।
एमालेका नेताहरुले केक काटेको प्रति एक समाजिक सामाजिककर्ताले एमालेनेताहरुलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्,–तपाईहरुलाई जनताले केक काट्न पठाएको की परिवर्तन गर्न ? तपाईहरु चुनाव जितेको उपलक्ष्यमा केक काट्नेदेखि ठुलठुला रेष्टुराँनै कब्जा गरेर जाँड पार्टी गर्ने, अनी राजधानीबासी दिनदाहाडौं काठमाडौंको सडकका खाल्डाखुल्डीमा परेर मर्नुपर्ने ?
किन त्यो रकम विकासे काममा लगाउन सक्नु भएन ? के यहि हो त, जनमतको कदर ? तपाईहरुले चुनाव जितेपछि तत्कालै जनताले के–के कुरामा परिर्वतनको अनुभव गर्न पाए ? स्पष्ट पारिदिनुहोस् । यसरी एमालेका नेताहरुको मोजमस्तीको सामाजिक संजालमा आलोचित बनेको छ ।